Ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa amasonto 12 ': amazinga ukukhula fetus
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, umama okhulelwe kufanele njalo uhlolwa udokotela. Owesifazane European isilinganiso uhambela udokotela izikhathi 10-15 phakathi naso sonke isikhathi ngaphambi kokubeletha. Yiqiniso, inani ukuvakashelwa iyahlukahluka kuye kakhulu ngenkambo ngabanye yokukhulelwa.
Ukubonakala kakhulu e emtholampilo kunemibandela kakhulu, kodwa kufanele ukuthi abantu abathatheneyo bangahlala ukubuza imibuzo, ikakhulukazi uma bekhulelwe kuqala.
Phakathi izinqubo isimiso bakhethe amanye esijabulisayo kulabo abazobe abazali ngokushesha. Yiqiniso, umama ulinde uthando nengane, uma uzokwazi ukubona kuye okokuqala esikrinini ngesikhathi ultrasound. Nge ukuthuthukiswa yesithombe umbungu esikrinini iyoba ngaphezulu ulwazi.
Ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa amasonto 12 ', kakade ubonisa lo muntu amancane. nezifundo uzobona ukuthuthukiswa imvuthuluka ngisho nesithome ilungu elisha lomkhaya.
Indlela ephephe kunazo zonke
Kukholakala ukuthi le ndlela ka uphethwe ochwepheshe ayinangozi kakhulu kodwa musa ukuncoma hhayi abahlukumeza emzweni odlulayo, futhi wathumela luhlolo is obelethisayo kuphela okuhloswe.
ultrasound Olumangalisayo enqunywe ngumgomo uma umsolwa udokotela kubangela ubuningi noma isakhiwo amniotic fluid, isikhundla noma isimo nge placenta, ubude wesibeletho, kanye isimo lesizalo myometrium.
Zonke ezinye ukuhlolwa kwenziwe kuphela ngokuhambisana ikhalenda aqine.
Ultrasound lokuqala ehlelelwe amasonto 5-8, kodwa iningi le ukuhlolwa sidlulile. Owesifazane angeke njalo ngokushesha ukwazi ukuthi ukhulelwe. Uma ucwaningo wenziwa ke kulesi sigaba Kumiswa iqiniso kuqala lapho kuhlala isisu, isikhathi salo olulindelekile kanye nokusebenza umbungu. Isithombe sikhombisa kuphela khona umbungu.
Esikhathini kusuka kumaviki awu 10 kuyaku 13 kufanele kube ultrasound njalo. Izithombe at ngesonto 12 usebenzisa onguchwepheshe ukuze asibuke kahle ngoba collar zone, kanye okunamathiselwe umzanyana kanye amniotic imingcele uketshezi. Kulesi sigaba isivele kungenzeka ngokunembile usethe olunqunyiwe nge ukunemba kwezinsuku ezimbalwa.
Phakathi 20 no-24 amasonto yenza omunye ukuhlolwa ultrasonic. Ngokukhethekile ikhokhelwa kuze abafanele usayizi asebenzayo futhi encane umzanyana kanye amniotic fluid. Zonke izibalo kuqhathaniswa nemiphumela odlule etholwe ngesikhathi ultrasound uma sebehlanganisa amasonto angu-12 esesibelethweni.
Lolu cwaningo sesine sikhombisa ukuthuthukiswa ngokuhamba kwesikhathi kuqhathaniswa iziqephu odlule. Ngokushesha ukuhlola fetoplacental futhi utero-esinomhlapho ukugeleza kwegazi ngosizo okubizwa ngokuthi Doppler indlela.
Kugcine ukuhlolwa ukwakheka umsindo phambi ukubukeka ingane zakhekile. Udokotela uyazinaka indawo kanye nesimo ingane, isikhundla intambo.
Abazali abaningi baqale ukwakha imvuthu isithombe albhamu ngaphambi kokuzalwa. Namuhla, uthole ikhadi ultrasound akukho nobunzima. Kuwufanele nje ukuxwayisa udokotela, futhi uyakujabulela ukubanika izithombe. Ngakho kungenzeka ngesikhathi sokuzalwa ukuqoqa iqoqo ehloniphekile, izincazelo nezifinyezo ukuthuthukiswa, isisindo, isimo ingane. Izithombe ezithakazelisayo kakhulu etholakala ekugcineni eyalandela, lapho kumiswa izici ingane ubuso. Khona-ke kuyoba mnandi ukuqhathanisa izithombe ultrasound nezithombe esezele.
Nakuba lezi zinguquko Ingaphandle akuzona lubonakale, ngosizo ubuchwepheshe besimanje udokotela kungacacisa ukuthi ubukhulu isithelo salowo muthi, ufake eqinisekile kwezidingo date. Konke lokhu kungenzeka ngisho nalapho ultrasound uma sebehlanganisa amasonto angu-12 esesibelethweni.
Uchwepheshe ihlaziya isimo kwesibeletho, ithoni yayo, ukutadisha indawo yi-placenta, likwenza kucace indawo zomzimba umbungu.
Owesifazane okhulelwe akunakwenzeka ukuba bakwazi ukuthola umfanekiso esikrinini, ngakho kufanele zicele incazelo ka-opharetha.
Kulesi sigaba, lo dokotela luqondiswe izibalo labalwa futhi sifinyelele eziphethweni mayelana Yiqiniso esesibelethweni, nalokho imiphumela ultrasound uma sebehlanganisa amasonto angu-12. Ukukhulelwa amazinga kunqunywa ngesisekelo kugcinwa inkambo jikelele abakhulelwayo kakhulu.
Ubani kuthanda nonogolantethe
Kukhona izindlela eziningi ukuthola ukuthi yini umntwana ongakazalwa kuyoba phansi. On US amasonto 12 isivele kungenzeka ukuthola. Iningi abazali emva inqubo uthola impendulo eside elindelwe yombuzo. Nokho, ngezinye izikhathi awukwazi ukufaka phansi kuze kube kokuzalwa komntwana, yize uhlelo sokuzala zakhekile. Abantu bathi ingane kuyoba namahloni, uma njalo efihla phansi kwesisu zedivayisi. Indlela kulokhu?
Kunocwaningo ukuthi inquma ozalelwe ngesisekelo isigqi inhliziyo. Kukholakala ukuthi amantombazane ayenakho ezingaphezu kuka-140 ngomzuzu, abafana - kancane. Kungatholakala kubhalwe ngaso opharetha US amasonto 12 ukhulelwe. Kodwa kunalokho kuba kuphela observation zokucabangela ngaphandle Eqinisweni kuqinisekiswa imithi. Ehlile amathuba okushona umdlalo - 50%, iyafana ematfuba nje ukuqagela.
Enye indlela kazwelonke ukuqagela ubulili womntwana - kuyinto ukubheka ukuma esiswini. Ayanda isikhundla umbungu esibelethweni - ke kwakusho yetinsita intombazane, futhi 'eliphansi "isisu - umfana. Nokho, gynecologists bathi yokuma fetus, ngenxa yalokho, ukuma esiswini kuthinta esinye isici. Kumayelana ububanzi izinqulu, amathanga kunengane - the libukhali kuyoba ukuma esiswini.
ukudla ekhethwayo kukamama esizayo futhi uthi insimu ingane. Kukholakala ukuthi likhetha amaswidi ukhuluma intombazane likhula futhi inyama - umfana.
Uma umuntu wesifazane okhulelwe efana luphola, kuyilapho uzalela ingane, le ntombazanyana ozozalwa. Kuthiwa indodakazi wondla ubuhle kanina. Ngesikhathi esifanayo, lo mfana esibelethweni lembula ukukhanga ukubukeka nokukhanya abesifazane.
Ngezinye ngesonto 12, ekupheleni senyanga yokuqala, ingane liyaqhubeka likhula ngokushesha. Khulisa izingalo nemilenze kwakhiwa, ingaphakathi lesisu is lapho emathunjini isakazwa. esiqalweni Nascent ka vellus izinwele: Ngokuzayo wabeka amashiya, le eyelashes, izinwele ezihlathini futhi lip engenhla. Okukhulu zeminwe.
Kuleli qophelo, ngenkuthalo umahluko izivikeli mzimba. Izindlala ukuqala ukukhiqiza ama-hormone ayo.
ingane Active gingqika, puckers izindebe zakhe, iphuza ketshezi, nezinkophe eshaywa, uphendulela ikhanda futhi abancela umunwe wakhe.
Ngalesi sikhathi ungakwazi ukuzwa ukushaya kwenhliziyo umntwana usebenzisa idivayisi Doppler.
Isikhundla umama okhulelwe
Ngo umama okhulelwe kwandisa kwesibeletho. Phakathi nesikhathi sokukhulelwa kwesibeletho kungaba usuke 10 ml kuya 10 amalitha nokusuka 70 g ukuze 1100 g.
Wamabele siba nezinzwa ezisenza sizwele ngaphezulu, usayizi waso iyakhula. Kwesisindo ngoba ngale nkathi 2 - 3, 5 kg. Abesifazane belulekwa ukuba ukuqhuba ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa amasonto 12 ', izitho zangaphakathi.
Isikhumba zingavela izindawo abomvu, ukulunywa, okubonisa hyperextension kwesikhumba. Kuyinto kulesigaba kubalulekile ukuqala kahle moisturize epidermis esebenzisa okhilimu ekhethekile. Ungesabi, futhi ukubukeka bunemithende emnyama eduze inkaba, konke lokhu kuyokwenzeka ngemva kokubeletha. Inhliziyo umama okhulelwe iqala ukushaya ngokushesha ukumpompa igazi ngaphezulu. Kodwa ukuchama iba ngaphansi ngokuziqhathanisa izinyanga ezintathu zokuqala.
Owesifazane ejwayele ngokuphelele nendima yayo entsha futhi kulula ukubekezelela imizamo ongakhulula amathumbu. Ukubhodla kanye ukuqunjelwa ezimweni eziningi kungase kushintshwe kalula ngokusebenzisa amandla.
Endabeni izici ngabanye noma toxemia yokukhulelwa amawele zigcinwe. Ngo kaningana kunezinye izici.
Vele kwezizukulwane ezimbalwa ezedlule, ukubukeka twins kwakuvame ukuba kube isimanga. Nokho, ngenxa ukusetshenziswa ultrasound kwezokwelapha kaningana kungenziwa okwatholakala ekuseni njengoba 5 ngesonto. Iqiniso ezivamile Kumiswa lapho ultrasound wokuqala kwenziwa uma sebehlanganisa amasonto angu-12.
Ukubona ukuthi ingane ozozalwa ezimbili nje, kubalulekile ukulungiswa ngokwengqondo abazali, kanye amalungiselelo adingekayo, ezifana ukuthengwa nemibhede futhi prams design akhethekile.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo kuzosiza ukuba zenze konke ezingakwenza ukuze avimbele izinkinga kanengi ngesikhathi sokukhulelwa amaningi.
Lezi zihlanganisa ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi futhi sikashukela sokukhulelwa. Kubalulekile futhi ukuthi ababelethisi nodokotela abathatha lokuzalwa, wayazi ngakho. Bear twins nzima, ngakho ukuya kudokotela futhi wenze amasampula test kudingeka kakhulu.
Ngale ndlela, i-ultrasound kuqala uma sebehlanganisa amasonto angu-12 ingane anganika abazali kuyinto ulwazi kubaluleke kakhulu futhi ulungiselela izinselele ayezobhekana nazo zazingaphezu.
olunembile ezingaphezu kuka-ultrasound
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana ukukhulelwa, kufanele uvule ngokujulile ukwedlula ultrasound. Ukuhlola iviki 12 isebenzisa idatha etholakele chemistry igazi. nakomaka ababili ihlaziye: khulula b-hCG futhi PAPP-A. Yingakho inqubo ubizwa nangokuthi ukuhlolwa kabili.
Odokotela batusa ukuba ukuqhuba ucwaningo zonke sokukhulelwa ezintathu.
Ultrasound ngesikhathi Ukuhlolwa kwenziwa kabanzi futhi inikeza ithuba ukuhlola "I-collar zone" ku-fetus, okuyinto yena, aqede ukukhubazeka indawo noma anomalies. Izoni itholakala phakathi kwezicubu ezithambile kanye isikhumba, lapho ketshezi aqoqana. Ngokuhamba sokukhulelwa, isikhala kushintsha njalo, futhi ukuze laba alabo abamaka yesikhashana babekwazi ukunikeza ulwazi olufanele, ukuhlolwa kufanele kwenziwe kudokotela ngokucacile ngangokunokwenzeka.
Ukutadisha okunjalo ungenza opharetha onekhono kakhulu, kusukela ngaphandle kwekutsatsa luhlangotsi idatha impela high.
Imiphumela Igazi test nazo okuhloswe ukuqeda ngeziphambeko umbungu. Yandisa b-hCG esivusa kabili izinsolo-fetus trisomy 21 (Down Syndrome), kanye ukwehla - Edwards syndrome. Kodwa konke lokhu kunikeza kuphela ngoba kucatshangwa ukuthi, yebo, imiphumela ingalungi.
Pro ne con
Ultrasound amasonto 12 noma kancane ngaphambili - ngokuvamile amasonto 8-12 - lokhu ulwazi olwengeziwe ku-Umeluleki mayelana usuku oluqondile akhulelwe umsebenzi fetus. Zonke ihlaziya umama okhulelwe kwenza bebodwa, eqondiswa izithakazelo impilo womntwana.
Kanti ngingumJuda yini mina ukhulelwe? ... umbuzo nzima!
Uyini ithoni kwesibeletho engxenyeni yezinyanga ezintathu zesithathu
Yiziphi izimpawu zokuqala zokukhulelwa phambi kokulibala?
Ngingasebenzisa raspberry ekukhulelweni: udokotela iseluleko
"Infiniti PC 45" - SUV enakho lomhlaba izici lobuchwepheshe
Amashiya "izindlu" nezinye izinhlobo amashiya
Imisebenzi edinga isihloko "isithombe enhle kakhulu emhlabeni"
Ureaplasma abesifazane. Izimbangela weni nasekwelapheni tifo yayo
"Toshiba 'TV: kuzibuyekezo, izintengo, izithombe, incazelo
Uwoyela Ant. Kanjani ukuyisebenzisa?
Isilinganiselwa smartphone 2013
Yini umnikelo "Ekhaya Credit" nenzuzo kakhulu ukwedlula izithakazelo ebhange, futhi kuyasiza ukwazi credit wakhe?
Ukupheka marshmallow ekhaya. Indlela elula